सुन्नेहरू जान्दछन्, बोलीको माधुर्य कस्तो हुन्छ ! जसरी सुमन खरेललाई चिन्नेहरू उनलाई सुनिरहूँ भन्ने अनुराग पाल्छन् । चार दशक भएछ उनको मधुरो, रेशमी आवाज विद्युतीय तरंगहरूमा फैलिएर रेडियो हुँदै मानिसका कानबाट पसेर हृदयमा बसेको ।
मगरजातीको प्रमुख चाड माघे संक्रान्ति यस वर्ष पनि खल्लो रह्यो । सदरमुकाममा सांस्कृतिक झाँकीसहित गरिँदै आएको माघे संक्रान्ती पर्व यस वर्ष मगर संघले औपचारिकताका लागि सीमित पुर्ख्यौली समूहमार्फत ‘सरस्वती’ पूजा गरी मनायो ।
सृष्टिदेखि प्रलयसम्म !
प्रत्येक दिन सूर्य हामीलाई भेट्न आइपुग्छ, प्रत्येक रात आकाशगंगा टिमटिमाउँछ, टाढा कतै तारा खस्छ ! यस्तो मोहक ग्रह, तारा, घाम, जून र यो सारा ब्रह्माण्डको जन्म कहिले भयो होला ? विज्ञान भन्छ– १३ अर्ब ७० करोड वर्षअघि । त्यसअघि विशाल शून्यताको समय थियो । न त्यहाँ ग्रह थियो, न तारा थिए, न थियो प्रकाश नै ।
कुरूप तथ्यको सुन्दर चित्र
आइरिस कवि वस्कर वाइल्ड भन्ने गर्थे, ‘शिक्षा प्रशंसनीय कुरा हो, तर पनि बेलाबेलामा के सम्झिराख्नु जाती हुन्छ भने जान्नयोग्य केही पनि सिकाउन सकिन्न ।’ अलिक विनोदी भावमा अभिव्यक्त वाइल्डको उपरोक्त कथनले झट्ट सुन्दा शिक्षाको मर्मको प्रशंसा गरेजस्तो लाग्न सक्छ । तर, अलिक गुनी हेर्दा यसले प्रचलित शिक्षण पद्धतिमाथि तीक्ष्ण व्यङ्ग्य गरेको छ । अझ, जसरी पनि ‘पढ्नैपर्छ’ भनेर एउटा रटिरटाउ तालिकालाई शिक्षा मान्ने हाम्रोजस्तो समाज, प्रणाली, शिक्षक र अभिभावकबारे उनको कथ्यको निहितार्थ बढी नै लाक्षणिक, तर तिक्ष्ण प्रतिहासयुक्त जँच्न पुग्छ भन्दा बाधा पर्दैन ।
सुरुमै एउटा प्रश्न, तपाईं यस धर्तीमा आएको कति वर्ष भयो ? बीस ? तीस ? चालीस ? पचास ? कि त्यसभन्दा पनि माथि ? उमेरअनुसार यहाँले संसारको थोरबहुत् अनुभव गर्नु भएकै होला । जीवनका तीतामीठा पलहरुको संग्रहले मन भरिएकै होला । सफलताहरु मिले होलान् । असफलताले अत्याए होलान् ।
आँसुमा नुन, समुद्रमा नुन
मान्छेको रगत, पसिना, आँसु, मासु, पिसाब र वीर्य इत्यादि सबैमा पाइने एउटै साझा तत्त्व के हो ? यो दोस्रो वाक्य पढिसक्नुअघि नै तपाईंको मनमा उत्तर फिरिसकेको हुनुपर्छ– नुन । हो, नुन नै त्यस्तो पदार्थ हो, जो जिब्रोबाट भित्र पसेपछि मान्छेको सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ, आफ्नो स्वादलाई दुरुस्तै राखेर ! अरू स्वाद पेटमा पुगेपछि बिलाउँछन्, नुनचाहिँ जीउभरि नै फैलिएर रजगज गर्छ । अरू प्राणी (मान्छेले पालेको बाहेक) नुन नखाने हुनाले तिनको जीउमा यसको बास हुने कुरै भएन । त्यसैले हुँदो हो, बाघले एक पटक मान्छेको रगत चाखेपछि अरू जनावर सिकार गर्ने रहरै गर्दैन, उसलाई मानिसकै रगत चाहिन्छ, किनभने यो नुनिलो हुनाले उधुमै स्वादिलो छ ।
जसले फैसला लेखे
संविधानको साँचो पालना भए रक्तपातबिनै परिवर्तन हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको बहिर्गमन र देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुमात्र होइन, प्रतिनिधिसभाले नयाँ जीवन पाउनुमा विधिशास्त्रको यही मान्यता लुकेको छ ।
एक योगीको स्वप्न संसार
बितेका कुराले हाम्रो जीवनमा के अर्थ राख्छ ? हजारौं वर्षअघिको कुनै घटना वा व्यक्तिको निर्णयले अहिलेको समाज र मानिसलाई के प्रभाव पार्छ ?
समय : अलग आयामको भाष्य
एउटा गीत छ दीपक खरेलको– प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ–कहाँ पुर्‍याउँछ...!
कानुनविद् भन्छन्- ‘संसद् जीवितै छ’
कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको कदमले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने बताएका छन् । भंग गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले त्यो जीवितै रहेको र सभामुखले अधिवेशन बोलाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।